नीकिताको लगानीमा फिल्म, रवि लामिछाने नायक ! | NewsSudur
नीकिताको लगानीमा फिल्म, रवि लामिछाने नायक !
चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको पत्नी नीकिता पौडेलले फिल्म निर्माण गर्ने भएकि छिन् । गोपीकृष्ण मुभिजले हिमालयन मुभी स्टुडियोसँगको सहकार्यमा चलचित्र ‘पर्खी बसें’ को नयाँ सिरिज दर्शक माँझ ल्याउने भएको छ । गोपीकृष्ण मुभिजकी नीकिता पौडेल र हिमालयन मुभी स्टुडियोको विनोद सापकोटाबीच सहमति अनुसार ‘पर्खी बसें २’ निर्माण हुने भएको हो ।